Caalamka, 12 December 2018
Arbaco 12 December 2018
France: Weerar ay Afar Qof ku Dhinteen
Booliiska Faransiiska ayaa baadi goob ugu jira nin habeenkii xalay ahaa rasaas ku furay meel u dhow suuq waxyaabaha ciidda masiixiga la xiriira lagu iibiyo oo ku yaalla magaalada Strasbourg. Weerarka ayaa waxaa ku dhintay 4 qof, 11 kalena way ku dhaawacmeen.
Sacuudiga oo diiday codsi uga yimid Turkiga
Wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga Adel al-Jubeir ayaa gaashaanka ku dhuftay codsi ay dowladda Turkiga Sacuudiga uga dalbatay in ay ugu soo gacan geliso laba sarkaal oo ka mid ah raga looga shakisan yahay in ay ka danbeeyaan dilka wariye Jamal Khashoggi.
Xuutiyiinta oo diyaar ah wada-hadallo dheeraad ah
Maalinta Musuq-maasuqa Dunida
Maanta oo dunida lagu xusay maalinta la dagaalanka musuq-maasuqa ayaa waxay ku soo beegmaysaa, iyada oo dowaldda Soomaaliya ayaamuddooyinkii dambe sheegeesay in ay la dagaaleeso Musuq Maasuqa waxaana loo xiray Wasiir ku xigeen iyo agaasimayaal dowladda ka tirsan.
Fadeexad Hareeysay Kubadda Cagta Afhganstan
Xeer ilaaliyaha guud ee dalka Afghanistan ayaa shaqada ka joojiyay shan xubin oo ka tirsan Xiriirka Kubadda Cagta Afghanstan, kaddib marki lagu eedeeyay falal anshax-xumo ah oo ka dhan qaar ka mid ah ciyaartooyda gabdhaha xulka qaranka ee dalkaasi.
Jilaa iyo Saxafi Turkish ah oo wajahaya xarig
Dacwad-oogayaasha Turkiga ayaa amray in lasoo xiro shakhsiyaad magac ku leh bulshada dhexdeeda kuwaas oo lala xiriirinayo in ay lug weyn ku lahaayeen bannaanbaxyo rabshado watay oo Turkiga ka dhacay sannadki 2013-ki.
Shir ku saabsan tahriibka oo lagu qabtay Jabuuti
Magaalada Djibouti waxa maanta si rasmi ah loogu soo gaba gabeeyey shir heer wasiir ah oo si gaar ah culeyska loogu saarayay wax ka qabashada arrimaha tahriibka.
Xuutiyiinta oo go'aan ka gaaraya wada-hadallada Yemen
Mucaaradka Yemen ee Xuutiyiinta ayaa sheegay inay maanta go’aan ka gaari doonaan haddii dowladda dalkaas ay daacad ka tahay wada-hadallada nabadda.
Qarax is-miidaamin ah oo ka dhacay Iran
Ugu yaraan saddex qof ayaa lagu dilay, 24 kalena waa ay ku dhaawacmen qarax is-miidaamin baabuur ah oo lagu qaaday xarunta booliska magaalo xeebeedka Chabahar ee koonfurta bari ee dalka Iran.